downloads 7 442
Russian fighter 60s. Dị na 3 repaints. Atọ ezigbo ụtọ ofufe.
The Sukhoi Su-15 (NATO koodu Flagon) bụ ihe niile na-weather interceptor na ogologo nso mepụtara site na USSR na 1960s. Wuru banyere 1300 mbipụta, na Su-15 anọwo na ọrụ site na 1967 ka 1996. Ya ọhụrụ mmepe, na Su-15TM, Su-21 na-kpọrọ ụfọdụ Western isi mmalite ọ bụ ezie na o yiri ka Soviet mgbe eji nke a designation.
The Su-15 na-maara na-ede akwụkwọ nke abụọ gbaa megide ndi nkiti na ugbo elu n'oge Agha Nzuzo: Flight 902 na 1978 (itule: 2 nwụrụ anwụ, 10 merụọ) na Flight 007 na 1983 (ndekọ: 269 tara). (Wikipedia)
Onye edemede: eldị: Brett Hoskins Textures: Mike Mahat (suite dans readme)